RASMI: IFAB oo si rasmi ah u ogolaatay in Tignoolojiyada Muuqaalka ee VAR loo adeegsado koobka adduunka – Gool FM
RASMI: IFAB oo si rasmi ah u ogolaatay in Tignoolojiyada Muuqaalka ee VAR loo adeegsado koobka adduunka
Liibaan Fantastic March 3, 2018
(Zurich) 03 Maarso 2018 – Hannaanka muuqaalka garsoorka kaaliya ee VAR ayaa horraabna fasal-ciyaraeedkan laga hirgeliyay horyaalka Serie A-da Talyaaniga, balse haatan waxaa si buuxda u ansixiyay Jamciyadda Caalamiga ah ee shuruucda kubadda cagta ee IFAB.
IFAB ayaa shir rasmi ahaa oo ay maanta yeelatay uga doodday adeegsiga hannaankan ku cusub sida loo garsooro kubadda cagta, cod aqlabiyad leh ayayna ku ansixiyeen, taasoo ka dhigan inuu sharci yahay.
Guddoonka FIFA ee Gianni Infantino ayaa isagu riixayay qorshe VAR looga dhaqan gelinayo Koobka Adduunka 2018 oo xagaagan lagu qaban doono dalkaasi Ruushka.
Sida ku cad baratakoolka IFAB, VAR waxaa kaliya loo adeegsan karaa shilalka la xiriira saxnimada goolasha, rigoorayaasha, roosayaasha qallalan iyo kiisaska yar ee laba laacib la isku khaldo, waxaana jira garsoore fadhiya oo inta muuqaalka qiimeeyo markiiba la hadla garsooraha garoonka ku jira.
Marar badan, horyaalka Serie A waxaa la sameeyay waxa loo yaqaanno ”hubin aamusan” oo dhegta ayaa garsooraha loogu sheegaa waxa dhacay si aanu ugu baahanin inuu markasta usoo ordo oo daawado muuqaalka taasoo waqti badan khasaarisa.
Waxaa inta badan taa loo adeegsadaa hobseedka, sidoo kale wuxuu garsooraha muuqaalka daawaday uu garsooraha dhexe u sheegi karaa haddii uu dhoco ”khalad cad”, waloow ilaa haatan marka ay arrimahaasi dhacaan uu garsooruhu doorbido inuu shilka dhacay isagu daawado qof ahaan.
VAR waxaa xiliciyaareed kaan lagu tijaabiyay horyaalka Talyaaniga iyo horyaalka Jarmalka, sidoo kale waxaa si tijaabo ah loogu adeegsaday kulamo ka tirsan League Cup-ka iyo FA Cup-ka ingiriiska.
Inkasta oo ay jirto cabasho laga muujinayo daqiiqadaha ay dib u dhigayso ciyaarta, hadana waa xal looga gudbi karo is qabqabsiga yimaada mararka qaar.
Xaaladaha ilaa haatan la isku raacay in loo adeegsado muuqaalka VAR:
1: Muranka ka dhasha dhanka goolasha.
2: Xaaladaha is qabsiga keena ee rigoorooyinka ama gool ku laadka.
3: Ciyaaryahan sameeyay qalad wayn oo ay tahay in si toos ah looga saaro garoonka.
4: Haddii jaale ama casaan la siiyo xiddig aan ahayn laacibkii qaladka sameeyay taas oo marar badan dhacday.
TOOS u daawo: Liverpool vs Newcastle - LIVE (Shaxda sugan)
''Berri waa final oo kale daalna ma maqli karo'' - Gattuso